Mandalar University – mandalaruniversity
Your chance to makeasuccessful career after completion of our courses.
There were 4,047 full various books. E-library can use access toawide range.
There are research papers of our teachers and term papers of our students.
Mandalar Degree College academic calendar is divided into two semesters of about 17 weeks each.
မန္တလာတက္ကသိုလ်သည် မန္တလေးမြို့၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး (၄၇) ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ (၁.၁၂.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် မန္တလာကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး (၂၂.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မန္တလာဒီဂရီကောလိပ် သည် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တို့နှင့် တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ (၁-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလာတက္ကသိုလ်အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်များ၊ သိပ္ပ္ပံဘာသာရပ်များအပြင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဧည်ဝန်ဆောင်မှု ဘာသာရပ်ကိုပါ မန္တလာတက္ကသိုလ်တွင် ရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အခြားဒေသများမှ လာရောက် တက်ရောက်လျှက်ရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ကျောင်းအဆာင်နေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ e-Library အသုံးပြုနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ကျောင်းသူ/သား ၆၀၀၀ ကျော်၏ ယုံကြည်မှုရရှိထားသော
The International Relations Office of Mandalar Degree College provides assistance to exchange international students and visiting faculty.